I-TeamViewer ngoku ikuvumela ukuba uthumele isikrini se-iPhone kwi-Android | Iindaba zeGajethi
I-TeamViewer ngoku ikuvumela ukuba uthumele isikrini se-iPhone kwi-Android
Ngokuqinisekileyo ngaphezu kwesihlandlo esinye usebenzise usetyenziso TeamViewer. Kulabo balahlekileyo kancinane, khankanya nje ukuba iyasebenza ukulawula kude ikhompyutha. Kwinguqulelo yamva nje yeqonga, ukongeza kuwo onke amanqaku kunye nezinto ezazifudula zinayo ngaphambili, ngoku ikwavumela ukufikelela kunxibelelwano olukude ukusuka kwiselfowuni ukuya kwiselfowuni, ke, ukuhambelana ne-iOS kunye ne-Android, kungavumela into abasebenzisi bebefuna ukwenza ukusukela kudala, belawula zombini isixhobo se-Android kunye ne-iOS esivela kwenye inkqubo.
Ngoku, ayisiyiQela leQela nje kuphela kuhlobo lwayo olutsha olunikezela ngobutsha, kodwa lonke ukhuseleko olunxulumene neqonga luhlaziyiwe. Ndiyabulela koku, abasebenzisi ngoku banokujonga uhlobo lwe isishwankathelo salo lonke unxibelelwano Kutshanje, iyafumaneka kuhlobo lweZiko nangaphezulu. Ukubhekisa kwi Isantya sokudlulisa yedatha ikuxelela ukuba ngoku ungasebenza ngesantya esifikelela kwi-200 MB / s, nditsho nokuthetha ngeeseshoni ezikude kwikhompyuter, ungaHit 60 izakhelo ngomzuzwana.
I-TeamViewer isungula ingxelo ye-12 yeqonga elidumileyo elinempawu ezintsha.
Ukuba unomdla kolu sebenzi, ngakumbi kule evumela ukuba ufikelele kwaye ulawule isikrini se-mobile ye-iOS, umzekelo kwiselfowuni ye-Android okanye Windows 10, nayiphi na kwezi nkqubo zokusebenza inokulawula enye. Ndikuxelele ukuba ifumaneka kuphela kwi- Inkokhelo yeNkulumbuso, nangaphezulu, kweqonga ngokwalo, ukuze ufikelele kulo msebenzi kuya kufuneka uhlawule imali encinci yenyanga.
Más información: TeamViewer
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » software » I-TeamViewer ngoku ikuvumela ukuba uthumele isikrini se-iPhone kwi-Android
Ii-AirPod zinokufika kwintengiso kwiveki ezayo
IPiston 3 Pro zii-headphone ezintsha zeXiaomi